Fiainana an-jorombala: Ny vahoaka Lyuli ao Ozbekistan · Global Voices teny Malagasy
Mizara ny eritreriny tamin'ny fotoana nolaniany tamin'ny vondrom-piarahamonina ny mpakasary Aleksandr Barkovsky
Voadika ny 05 Marsa 2020 2:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Italiano, Español, Ўзбекча, 繁體中文, Esperanto , Français, English
Tanora lahy iray avy amin'ny vondrom-piarahamonina Lyuli ao Ozbekistan ao amin'ny faritany atsimo ao Surxondaryo. Saripika (c): Aleksandr Barkovsky. Nahazoana alalana.
Akanin'ny ampira sy firenena maro ao Azia Afovoany, toetra hita taratra ao amin'ny mponina marofoko mihoatra ny 30 tapitrisa i Ozbekistan. Raha ny foko Ozbeka no maro an'isa, dia misy vondrona hafa manakaiky ny 50 ao, tafiditra amin'izany ny Luli na Lyuli. Matetika voahilikilika noho ny foko misy an-dry zareo ity vondrom-piarahamonina madinika miaina anjorom-balan'ny fiarahamonina Ozbeka ity.
Heverina ho hava-tetezina amin'ireo vahoaka Roma sy Sinti avy ao Eoropa sy Afovoany Atsinanana ny Lyuli, saingy tsy mazava ny niandohan-dry zareo. Amin'izay lafiny izay dia vitsy ny marimaritra iraisana amin'ny hamariparitana io vondrom-piarahamonina io amin'ny teny anglisy. Amin'ny teny rosiana, ny voambolana iraisana indrindra dia ny “цыгане” — izay adika hatrany ho amin'ny teny anglisy hoe “Gypsies”, izay heverin'ny maro ho karazam-panesoana ihany ary maro no nanolo azy tamin'ny voambolana “Roma.”
Araka ny fandinihana nivoaka tamin'ny taona 2019 notarihan'ilay Ozbeka mpikaroka, Kamilla Zakirova:
Antsoina hatrany hoe Lyuli ny Roma ao Azia Afovoany. Mampiasa ny voambolana Mughat, voambolana iraniana midika hoe “mpanaraka ny fivavahana amin'ny afo”, izay ampiharina amin'ny Zoroastrianina, ny Lyuli raha mamariparitra ny tenany. Efa an-jatony taona maro, hatramin'ny nialan'ny razambeny avy any Punjab ao Pakistan amin'izao fotoana, ry zareo no nonina tao Azia Afovoany. Tsy misy ny lahatahiry mahavaly marina momba ny vahoaka Lyuli satria tsy mandray anjara amin'ny fanisam-bahoaka ataon'ny governemanta ry zareo ary maro amin'ny Lyuli no tsy mahazo taratasy ara-panjakana mihitsy.
Niantsafa tamin'i Aleksandr Barkovsky aho, artista ara-tsirinkevitra (conceptual) izy sady mpikatroka manana fahalianana manokana amin'ny Lyuli, na dia avy amin'ny foko Rosiana aza, ary efa nanao andian-dahatsary fohy momba ny vondrom-piarahamonina. Nahitsy ho fohifohy kokoa ny antsafa.
Filip Noubel: Inona ny olana ara-tsosialy lehibe indrindra atrehin'ny Lyuli amin'izao fotoana?
Aleksandr Barkovsky: Ny olan'ny fanabeazana. Misy tsy ankiteniteny iraisana fa tsy ho tratra mihitsy ary misy lafiny tsy ilaina ny fanabeazana. Misy lafiny roa mahatonga izany, satria mitazona ny tarazon'ny fahefan'ny ray ny vahoaka Roma ary avy amin'izany izy no lohan'ny zana-poko, lehilahy iray mihazona ny fahefana rehetra, manapa-kevitra tsy mirona mankany amin'ny fanabeazana fa mankany amin'ny fitsipika napetraky ny fiaraha-monina. Mihevitra ny ankamaroan'ny olona fa rehefa misafidy ny tsy hanohy ny fianarana (fanabeazana) ny Lyuli, dia tsy misy dikany ny manome vintana azy ireo hianatra sy hanovo talenta maro. Fa raha misy ny manao fitsapan-kevitra amin'ny vondrom-piarahamonina, dia hahita fa maro ny Lyuli te-hanova ny fiainany. Milaza ny olon-dehibe fa te-“hanome fiainana tsara kokoa ho an'ny zanany” ry zareo ary mahatakatra fa ny fomba tokana hanatrarana izany dia amin'ny alalan'ny fanabeazana tsara (kalitao).
FN: Midika ve izany fa tsy tafiditra any amin'ny fanabeazana mihitsy ny kilonga Lyuli?
AB: Ny iray amin'ny olana lehibe indrindra dia tsy avela miaina ny fahazazany ny kilonga Lyuli. Maro zaza ny fianakaviana Lyuli, saingy ny atsasany na ny latsak'izany no miangana. Herinandro vitsy monja taorian'ny nahaterahany dia entin-dreniny any afovoan-tanàna ao anatin'ny hainandro mingaingaina na miaritra ranomandry ny zanany ka tazoniny amin'ny tanany ilany fa ny (tanana) iray hafa kosa entina angatahana. Vokatr'izany dia efa trohin'ny ankizy miaraka amin'ny nonon-dreniny sahady ny endriky ny tontolo anjakan'ny fangatahana, tsy fisiana, fanamavoana ary ny daroka tsy mitsahatra.
zazalahy Lyuli miatrika sekoly ho an'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny faritany atsimo ao Surxondaryo. Saripika (c): Aleksandr Barkovsky. Nahazoana alalana.
FN: Manao ahoana ny toeran'ny vehivavy eo anivon'ny vondrom-piarahamonina?
AB: Tsy mitovy sata amin'ny lehilahy ny vehivavy amin'ny fiaraha-monina Roma. Tsy mitovy zo ry zareo, saingy maro ny adidiny. Mila miteraka maro ry zareo na tiany na tsy tiany —ny fianakaviana maro anaka no hahazoan-dry zareo haja eo amin'ny fiaraha-monina, ary ny fanontaniana voalohany azon'[ny vehivavy] dia hoe firy ny isan-janany. Alohan'ny fanambadiana ihany no fomba tokana ahazoan'ny vavy fanabeazana, ary vitsy tena vitsy izany. Indirndra moa fa tena mbola tovovavy kely dia efa tontosaina ny fanambadiana; amin'ny faha-14 na faha-15 taonany ny zazavavy dia efa manambady.
Mpivady Lyuli ao amin'ny fitobian'ny lasy (trano lay) eo ivelan'i Tashkent, renivohitr'i Ozbekistana. Saripika (c): Aleksandr Barkovsky. Nahazoana alalana.
FN: Manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fiainan'ny Lyuli Roma ve ny fivavahana?
AB: Manondro tena ho Miozolomana Sonita ny Lyuli Roma. Mitandrina ny vavaka ry zareo, sy ireo zavatra ara-pivavahana sy fankalazana ara-pivavahana hafa tsy maintsy atao. Ao amin'ny fiarahamonina miozolomana lahika ry zareo mizaka fanilikilihana avy amin'ny Ozbeka sy ny Tajika, izay tsy mihevitra azy ireo ho “tena” Miozolomana noho ireo singa tsy ara-pivavahana amin'ny fombam-pivavahan-dry zareo, amin'ny rafitra ara-pokon-dry zareo ary amin'ny fanompoana afo. Ny fahatakaran'ny vondrom-piarahamonina Lyuli ny Islamo dia manakaiky kokoa ny spiritoalisma Islamika malaza eny anivon'ny vahoaka mifangaro amin'ireo singa talohan'ny vanim-potoana Islamika, izay mbola mitoetra amin'ny fiainan'ny Lyuli Roma ihany mandraka androany.
Fianakaviana Lyuli ao amin'ny toera-pasana Rosiana Orthodoksa any Tashkent amin'ny paska, raha fomban-drazana ny misakafo akaikin'ny vatom-pasana amin'io fotoana io. Saripika (c): Alexander Barkovsky. Nahazoana alalana.
FN: Ahoana ny fomba fiasan'ny governemanta amin'ny olana ara-tsosialy atrehin'ny vondrom-piarahamonina?
AB: Ny antony lehibe tsy hananan'ny Lyuli Roma fiarovana ara-tsosialy dia satria tsy misy mahalala na inona na inona momba azy ireo fotsiny izao. Aiza ireo no monina? Firy amin'izy ireo no ao? Tsy hisy fiantraikany izay politika ho apetraky ny governemanta. Izany no mahatonga ny hoe raha hiaro ny zon-dry zareo araka ny lalampanorenana dia ny mangarahara sy torohay bebe kokoa no ilaina.